Ichokwadi here kuti kana murume akandipinza mboro ndisina matinji inongobuda yega? - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Ichokwadi here kuti kana murume akandipinza mboro ndisina matinji inongobuda yega?
Ichokwadi here kuti kana murume akandipinza mboro ndisina matinji inongobuda yega?
Hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete. Mukadzi wese asina kuremara ane matinji. Matinji kukura kwawo hakunei nokupinzwa mboro nemurume. Murume anopinza mboro kuzasi kwebeche. Matinji ari kuno kumusoro kukabhinzi. Kana ukaiswa wakafongora zvinokwanisika kuti mboro haitombosangani nematinji.
Vanhu vanofarira nhema kukutyisa kuti ude kudhonza matinji chete. Varume chaivo vakawandisa havanei nokuti une matinji marefu here kana kwete. Murume kana amira mboro chaanoda kupinza mubeche remukadzi wake chete. Murume haafungi zvakawanda kana mboro yamira apa mukadzi wake aripo. Zvokuti mukadzi akamira sei pamberi zvinongoitwa imwewo nguva.
murume akandipinza mboro ndisina matinji